Huawei Cloud သည် ဆန်းသစ် သော ၀ န်ဆောင်မှု ၁၅ ခုနှင့် မိတ်ဖက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မူဘောင် နှစ်ခုကို ထုတ်ပြန် ခဲ့သည် - Pandaily
Huawei Cloud သည် ဆန်းသစ် သော ၀ န်ဆောင်မှု ၁၅ ခုနှင့် မိတ်ဖက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မူဘောင် နှစ်ခုကို ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်
Jun 16, 2022, 21:32ညနေ 2022/06/16 23:11:50 Pandaily
In…Huawei Partner & Developer Conferenceဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် Huawei Cloud သည် ဆန်းသစ် သော ၀ န်ဆောင်မှု ၁၅ ခုနှင့် GoCloud နှင့် GrowCloud မိတ်ဖက် မူဘောင် နှစ်ခု ကိုပြသခဲ့သည်။ ဒီ ညီလာခံ ဟာ Huawei ရဲ႕ ICT flagship ၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္တဲ့ Huawei Developer Contest ကို စတင္ က်င္းပတဲ့ ပြဲ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
Huawei Cloud ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Zhang Ping Ping က အဓိကကျသော မိန့်ခွန်းတွင် ပြောကြား ခဲ့သည်မှာ “ကုမ္ပဏီများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် နက်ရှိုင်း မှု သို့ ရေငုပ် လာသည်နှင့်အမျှ SaaS ၏ မွေးစား မှုသည် စက်မှုလုပ်ငန်း များ၌ တိုးပွားလာ နေသည်။ လာမည့် ဆယ် နှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် SaaS ၏ ရွှေ ဆယ်စုနှစ် ဆီသို့ ဦး တည် နေသည်။ Huawei Cloud သည် အရာ အားလုံးကို ၀ န်ဆောင်မှု ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် SaaS ကို စက်မှုလုပ်ငန်း သို့ ပိုမိုမြန်ဆန် စေရန် အကောင်းဆုံး cloud [service] ကိုဖန်တီး ရန်ကြိုးစားသည်။ Cloud ၀ န်ဆောင်မှုများ ကိုစဉ်ဆက်မပြတ် တီထွင် ခြင်းနှင့် မိတ်ဖက် များ၊ developer များ နှင့်နီးကပ်စွာ အလုပ်လုပ် ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆန်းသစ်တီထွင် မှု၏ မီးပွား ကို လောင်ကျွမ်း စေပြီး အနာဂတ် ကို အတူတကွ ထွန်းလင်း စေ မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ “
Huawei Cloud CEO Zhang Ping (ဓာတ်ပုံ-Huawei)
ဆန်းသစ် သော ၀ န်ဆောင်မှု ၁၅ ခုတွင် ၀ န်ဆောင်မှု တစ်ခုအနေဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု ၊။ ၎င်းတို့တွင် စက်မှု လုပ်ငန်း၊ အစိုးရ၊ အပူ ၊ ကျောက်မီးသွေး တွင်း နှင့် ပညာ ရေးအတွက် aPaaS ၀ န်ဆောင်မှု ငါး ခုပါဝင်သည်။ အဓိက aPaaS ၀ န်ဆောင်မှု နှစ်ခု-တစ်နေရာ တည်း တွင် ကြွယ်ဝသော မီဒီယာ စာတို ပေးပို့ ရေး application အတွက် KoMessage နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် အမွှာ မို cloud ်း တိမ် မြေပုံ အတွက် KoMap; အသစ် Cloud Store KooGallery ။
Zhang သည် DataArts ဒေတာ စီမံခန့်ခွဲမှု ပိုက်လိုင်း နှင့်အခြား ပိုက်လိုင်း သုံး ခုအတွက် ၀ န်ဆောင်မှု အသစ် များကိုလည်း ကြေငြာခဲ့သည်။ ဤ ပိုက်လိုင်း များတွင် MetaStudio ဒစ်ဂျစ်တယ် အကြောင်းအရာ အတွက် Virtual Human Service ၊ ModelBox (AI Application Development Framework) နှင့် DevCloud Software Development Pipeline အတွက် CodeArts IDE တို့ပါဝင်သည်။
GoCloud နှင့် GrowCloud တို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မူဘောင် နှစ်ခု ကိုလည်း ကြေငြာခဲ့သည်။ မိတ်ဖက် များအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ယှဉ်ပြိုင် နိုင်စွမ်း ကိုတိုးမြှင့် နိုင် ရန်နှင့် စျေးကွက် လက်လှမ်းမီ မှု ကိုတိုးချဲ့ ရန်ရည်ရွယ်သည်။ GoCloud ၏ ရည်မှန်း ချက်မှာ မိတ်ဖက် များ၏ ယှဉ်ပြိုင် နိုင်စွမ်း ကိုမြှင့်တင် ရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မိတ်ဖက် များသည် Huawei Cloud ကို အသုံးပြု၍ အားကောင်းသော ဖြေရှင်း ချက်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ ကိုတည်ဆောက် ရန်နှင့် ဖောက်သည် များအတွက် ပိုမို တန်ဖိုးရှိ စေ ရန်ကူညီ ရန်ဖြစ်သည်။ GrowCloud သည် မိတ်ဖက် များအား ဖောက်သည် များ၏ လွှမ်းခြုံ မှု ကိုတိုးချဲ့ ရန်နှင့် နှစ်ဖက်စလုံး ၏အကျိုး အတွက် ရောင်းအား တိုးတက်မှုကို အရှိန်မြှင့် ရန်ရည်ရွယ်သည်။
လက္ရွိမွာေတာ့ Huawei Cloud မွာ မိတ္ဖက္ ၃ ၈၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ Developer ေပါင္း ၃. ၀၂ သန္း ေက်ာ္ရွိၿပီး မိတ္ဖက္ ေတြက ေစ်းကြက္ ထုတ္ကုန္ ေပါင္း ၇, ၄၀၀ ေက်ာ္ကို ျဖန္႔ခ်ိ ထားပါတယ္။ စမတ် မို cloud ်း တိမ် ၏ အခြေခံအုတ်မြစ် အဖြစ် Huawei Cloud သည် Kunpeng, Ascend, HarmonyOS နှင့် Huawei Mobile Services (HMS) ကဲ့သို့သော ဂေဟစနစ် များနှင့် ပူးပေါင်း၍ developer ဂေဟ စနစ်ကို ထောက်ပံ့သည်။ Huawei Cloud သည် ယခုနှစ်တွင် developer ၁. ၄ သန်းကျော် ကိုဆွဲဆောင် ရန်ရည်ရွယ် ထားပြီး developer ၅ သန်းကို စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင် ရန်စီစဉ်ထားသည်။
ကွန်ဖရင့် ၌ “Spark Infinite” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Huawei Developer ပြိုင်ပွဲကို တရားဝင် စတင်ခဲ့သည်။ Huawei ၏ ထိပ်တန်း အိုင် စီတီ ပြိုင်ပွဲ ဖြစ်သော Huawei Developer Contest သည် Cloud-based Circuit နှင့် Industrial Circuit များကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ ဒေသ ခြောက် ခုကို လွှမ်းခြုံ နိုင်ခဲ့ပြီး ဆု ရေကူးကန် ယွမ် ၅ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇ ၄၄, ၅၀၀) ကို ပေးခဲ့သည်။
ကွန်ဖရင့် အပြီးတွင် Huawei သည် အုပ်စုလိုက် တွေ့ဆုံမေးမြန်း ခြင်းကို လက်ခံခဲ့သည်။ Pandaily နှင့် အခြားသော ပြည်တွင်း မီဒီယာ များသည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မူဘောင် နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်း အချို့ မေး ခဲ့ကြသည်။
မတည်မငြိမ်လက်ရှိ တည်နေရာ Huawei Cloud သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကြီးထွား လာသည်။ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ၎င်း၏ စီးပွားရေးကို နိုင်ငံရပ်ခြား သို့ ယူဆောင် လာ ရန် စဉ်းစား နေ ပါသလား။ လာမည့် သုံး နှစ်မှ ငါး နှစ်အတွင်း နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ ၀ ိုင်း အတွက် မည်သည့် အစီအစဉ် များရှိ ပါသလဲ။
Shi Yak (Huawei Cloud Global Marketing and Sales Services ၏ဥက္က President ္ဌ): Huawei Cloud သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကောင်းဆုံး cloud service provider ဖြစ်လာ ရန် စိတ်ပိုင်းဖြတ် ထားသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ကျွန်ုပ်တို့သည် အာရှပစိဖိတ် ၊ လက်တင်အမေရိက နှင့်တရုတ် အပါအ ၀ င် အဓိက ဒေသ ၄ ခုတွင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ထူထောင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် ကျွန်ုပ် တို့တွင် ဒေသ ၂၇ ခု၊ ရရှိနိုင်သည့် ဇုန် ၆၅ ခုနှင့် အကြောင်းအရာ ဖြန့်ဖြူး ရေး ကွန်ယက် ၂၅၀၀ ကျော် (CDN) node များရှိပြီး ကမ္ဘာအနှံ့ ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၁၇၀ ကျော်မှ ဖောက်သည် များနှင့် မိတ်ဖက် များကို ၀ န်ဆောင်မှု ပေးသည်။ Huawei Cloud သည် နိုင်ငံရပ်ခြား စျေးကွက် များ ကိုချဲ့ထွင် ခဲ့ပြီးထို ဒေသတွင် အတွေ့အကြုံ များစွာ ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဟောင်ကောင်၊ စင်္ကာပူ နှင့် မလေးရှား တို့တွင် ဒေသ များကို နေရာချ ပေးခဲ့သည်။ ယခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် အင်ဒိုနီးရှား ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေသ သစ်ကို မကြာမီ စတင် လည်ပတ် တော့ မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖိလစ် ပို င်၊ ဗီယက်နမ် ၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန် နှင့် တောင်ကိုရီးယား စသည့် နိုင်ငံများတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေတာ စားသုံးမှု ၀ န်ဆောင်မှု များကိုလည်း ဖြန့်ကျက် သွားမည်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mr. Zhang သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ KoVerse ကွန်ယက် ဖြစ်သော အခြေခံအဆောက်အအုံ အဆင့် cloud service ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အနာဂတ်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပေါင်းစည်း ထားသည့် ကွန်ယက် တစ်ခု တည်ဆောက်ရန် စီမံကိန်း ပတ် ၀ န်းကျင်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး များအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ပေးရန် cloud အခြေခံအဆောက်အအုံ များတွင် ထပ်မံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ရန် အစပြု လုပ်ဆောင် သွားမည်။ ယခုနှစ် နှောင်းပိုင်းတွင် အိုင်ယာ လန်၊ တူရကီ နှင့်အခြား နိုင်ငံများတွင် ဒေသများ တည်ထောင် မည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဆော်ဒီအာ ရေ ဗျ ၊ ဖိလစ် ပို င်၊ အီ ဂျ စ်၊ ဆွစ်ဇာလန် နှင့်အခြား နိုင်ငံ များကဲ့သို့သော အခြား ရွေးချယ်စရာ များ ကိုကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာ ပါမည်။ အတိုချုပ် ပြောရ လျှင် Huawei Cloud သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကောင်းဆုံး cloud service provider ဖြစ်ရန် အမြဲတမ်း စိတ်ပိုင်းဖြတ် ထားသည်။ လာမည့် သုံး နှစ်မှ ငါး နှစ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံတကာ အဆင့် နှင့်စီးပွားရေး မြှင့်တင် ရေးကို တဖြည်းဖြည်း တိုးမြှင့် သွားမည်ဖြစ်သည်။
သတင္းစာ: ငါ ဒီနေ့ Huawei ပြော နေတဲ့ ဒီဂျစ်တယ် အကြောင်းအရာ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း များနှင့် ဒီဂျစ်တယ် စာသား များ၏ ခေါင်းစဉ် ကိုလိုက်နာ ခဲ့သည်။ သင်၏ ကုမ္ပဏီသည် meta-စကြာ ၀ strategyာဆိုင်ရာ မဟာ ဗျူ ဟာကို ကြေငြာ ခြင်းမရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် ၎င်း နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ် တို့နှင့် မျှဝေ လို ပါသလား။ ထို့အပြင် ဒစ်ဂျစ်တယ် အက္ခရာ များ စတင် ခြင်းသည် Huawei သည် meta-universe တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများ တိုးမြှင့် နေသည်ဟု ဆိုလို ပါ သလော။ ယနေ့ စျေးကွက် တွင် ဂဏန်း သင်္ကေတ များစွာရှိသည်။ မင်းရဲ့ အားသာ ချက်က ဘာ လဲဆိုတာ ငါ သိချင် တယ်။ ဒါမှမဟုတ် လွှတ်တင် ပြီးတဲ့ နောက်မှာ မင်းက အဆင်မပြ ေတဲ့ အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်ရ မလား။
Zhang Yuxin (Huawei Cloud CTO): တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာ အရ meta-cosmic အယူအဆ သည် လွန်ခဲ့သော နှစ် မှစ၍ ပေါက်ကွဲ ခဲ့ ပြီး၎င်းသည် လူသိရှင်ကြား လှုံ့ဆော်မှု ကြောင့်ဖြစ် မည်ဟု ကျွန်ုပ် ထင် ပါသည်။ Huawei က နည္းပညာ ကို အေျချပဳ ထားတဲ့အတြက္ နည္းပညာ ရဲ႕ Flow ကို စိတ္မ ၀င္ စား ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ ဂရုစိုက် သည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောင်းပွ မှု နောက်ကွယ် ရှိ အနှစ်သာရ ကိုနားလည် ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ် အားဖြင့် နည်းပညာ အခြေခံ ကိုနားလည် နိုင် ခြင်းရှိမရှိ ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ ဖြေရှင်း ဖို့ နည်းပညာ အဆင့်မြှင့် တွေအများကြီး ရှိသည်။ ဒီ ကွန် ဖရ မှာ ကျနော်တို့ နောက်ထပ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် content ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း နှင့် MetaStudio အပေါ်အခြေခံပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများကို အဆင့် မြှင့်တင် ရန်, အထူးသ ဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဇာတ်ကောင် န်းကျင်, ကို virtual ဖျော်ဖြေပွဲ, ညီလာခံ, ရုံး ပူးပေါင်း, စက်မှု ထုတ်လုပ်မှု, စက်မှု ဒစ်ဂျစ်တယ် အမွှာ နှင့် အခြား applications များ ထော ကျပ ံ့ ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် အက္ခရာ များကိုလေ့လာ ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဒိုမိန်း ကိုမြှင့်တင် ရန်နှင့် ဒိုမိန်း ၏ တံခါးခုံ ကိုလျှော့ချ ရန်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် ၎င်းသည် သယံဇာတ သုံးစွဲမှု ဖြစ်စေ၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖြစ်စေ ဖြစ်စေ နည်းပညာ လိုအပ်ချက် များမှာ မြင့်မားသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Huawei Cloud သည် ဘေဂျင်း တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆ သန်း မှတ်ပုံတင် ထားသည့် လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီ အသစ် ကိုတည်ထောင် ခဲ့သည်
Market Jun 24 ဇွန် 24, 2021
၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ cloud service အသုံးစရိတ် သည်ဒေါ်လာ ၇. ၃ ဘီလီယံ အထိရောက်ရှိ ခဲ့သည်
တရုတ် ပြည်မ ကြီးမှာ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ် မှာ cloud အခြေခံအဆောက်အအုံ ဝန်ဆောင်မှု အသုံးစရိတ် ဟာ တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂၁ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက် လာပြီး ဒေါ်လာ ၇. ၃ ဘီလျံ အထိ ရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ cloud အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးစရိတ် ရဲ့ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိတယ်လို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ထုတ်ပြန် တဲ့ Canalys ရဲ့ အစီရင်ခံစာ မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ARCFOX Alpha S Huawei HI Edition ကို ဇူလိုင်လ မှာ ဖြန့်ချိ မည်
BAIC Blue Garden New Energy အမှတ်တံဆိပ် ARCFOX က၎င်း၏ Alpha S မော်ဒယ်၏ HI ဗားရှင်း အသစ်ကို ဇူလိုင်လ နှောင်းပိုင်းတွင် အပြည့်အဝ ပေးဆောင် သူ များသို့မဟုတ် သိသိသာသာ သိုက် များ ပေးဆောင် သူများအား ပေးပို့ လိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။